“घरजग्गा किनबेच गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु” - IAUA
१. घर किन्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरुः–
घर भनेको जीवनमा धेरैचोटी किनीरहन सकिदैन । त्यसैले घर किन्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
– घरको लोकेशन÷ठाउँ पनि विचार पु¥याउनु पर्छ । आफ्नै कित्तामा बनेको र वरिपरि पर्याप्त जग्गा छोडेको छ छैन हेर्नुपर्छ ।
२. जग्गा किन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुः–
– काठमाडौंको हिसाबले हेर्दा जग्गा पूर्व, दक्षिण मोहडा भाको उपयुक्त हुन्छ ।
– उच्च विद्युत चाँप प्रसारण रेखा भन्दा १०-१५ मिटर टाढा जग्गा हुनुपर्दछ ।
माथि उल्लेखित सबै कुरामा विचार पु¥याएर घरजग्गा खरिद गर्ने हो भने हामीले भविष्यमा पछुताउनु पर्दैन । नत्र दुःख गरी कमाएको सम्पति र भविष्यको लागी जोडेको घरजग्गा व्यर्थ हुन्छ । त्यसैले समयमै सचेत भई हरेक कुराको सोध, खोज र अनुसन्धान गरी समय लगाएरै घरजग्गा किनेमा आफू र आफ्नो सन्ततीको लागी जीवनभर खुशीको बहार ल्याउन सकिन्छ र भविष्यमा आफूले गरेको लगानी ठीक ठाउँमा रहेछ भनी खुसी र आनन्दमा रमाउन सकिन्छ ।
– लेखक जियोमेटिक इन्जिनियर हुनुहुन्छ ।ashimbabu.com.np
Previous Previous post: जिम जानुअघि जान्नैपर्ने कुराहरु
Next Next post: बिहानको खाजा नखाँदा धमनी कडा हुने ‘एथरोस्क्लेरोसिस’ के हो ?